ESTA AMERICA APPLICATION - ESTAmerica US ESTA E-Filing Adeegyada Safarka
Barnaamijka VISA WAIVER PROGRAM (VWP)
KASTA XAALADDA ESTA
Barnaamijka Ka-Reebidda Visa EISA
E-Faylka PASSPORT Fadlan
MAS'UULIYAD NIDAAMKA US ELEKTRONIC SYSTEM
CODSIGA WAALIDIINTA Calaamadee CODSIGA HUB
Ma ubaahantahay caawinaad bilawga ah?
E-FILING A WAA MAXAY YIHIIN VISA VISA?
Safarrada Caalamiga ah ee u Qalma oo doonaya inay u safraan Mareykanka iyadoo la raacayo Barnaamijka Ka-dhaafka Visa waa inay codsadaan oggolaansho.
Muwaadiniinta ama Muwaadiniinta u Qalma:
Waxaad tahay muwaadin ama wadani u qalma barnaamijka Dalalka Visa Waiver Program.
Safarkaagu wuxuu u yahay maalmo 90 ama ka yar.
Waxaad qorsheyneysaa inaad u safarto Mareykanka si ganacsi ama raaxaysi.
Adigu iminka ma haysatid fiisaha booqashada.
Macluumaadkee Loo Baahan Yahay:
Baasaboor sharciyeysan oo ka socda Dalalka Barnaamijka Ka-Reebidda Visa
Kaar kaadhka deynta ah (MasterCard, VISA, American Express, iyo Discover si aad u bixiso $ 89 kharashka dalbashada.
Macluumaadkaaga xiriirka. (Magaca, Lambarka Telefoonka, Cinwaanka Boostada, iyo Cinwaanka Email)
Cinwaanka iyo macluumaadka xiriirka ah ee joogitaankaada.
Codsiga ESTA ayaa sharaxay
Maxaan ubaahanahay inaan codsado ESTA?
Waxaad u baahan doontaa baasaboorkaaga iyo kaarka bixinta si aad u soo gudbiso arjiga. Safarkaaga safarka waa ikhtiyaari ah inuu soo gudbiyo laakiin waa lagu dari karaa. Fadlan eeg dib u eegiskayaga su'aalaha caadiga ah iyo jawaabahaaga ku saabsan Xaaladda ESTA
Lacag-bixinta loo sameeyey Codsiga ESTA. ,
Dhammaan Lacagaha loogu talagalay codsiga ESTA waa in lagu meelmaraa credit ama kaarka bangiga. Dowladda Mareykanka maahee marka laga reebo jeegaga ama amarada lacagta ee codsiga ESTA, oo ka tagaya shirkado khaas ah sida ESTAmerica.org si ay uga caawiso "Nidaamka Farsamada ee Ogolaanshaha Safarka"Geeddi-socodka. Waxaan aqbalnaa dhammaan noocyada waaweyn ee kaararka. Fadlan nala soo xiriir haddii aadan awoodin inaad bixiso kaarka deynta, laakiin habka ugu fudud ayaa leh kaarka ama deyn bixinta.
Hubi codsigaaga ESTA
Ma ubaahantahay inaad cusboonaysiiso, xaqiijiso, ama aad cusbooneysiiso ESTA?
Waxaa jira goobo cayiman oo kaliya oo dib loo cusbooneysiin karo ESTA ka dib markaad heshay oggolaansho safar oo la oggolaaday. Waxaa si xoog leh lagula talinayaa inaad dib u eegto ESTA aad u fiican ka hor safarkaaga Mareykanka si aad waqti is-siisid haddii ay jirto qalad codsigaaga. Haddii aad qabto wax su'aal ah oo ku saabsan soo gudbinta, fadlan naga soo dir.
Miyuu Visa iyo ESTA isku mid yahay?
Oggolaanshaha ESTA ma ahan fiiso. Waa horay u-nadiifin si aad ugu safartid VWP, kaas oo loogu talagalay in loo oggolaado in dadka safarka ah in ay maraan marxaladda fiisada waqti-dheer. The Oggolaanshaha ESTA maaha mid u dhiganta Fiisaha Mareykanka ee hab kasta, loomana beddeli karo fiiso marka xaaladaha fiisaha loo baahan yahay. Uma baahnid ESTA haddii aad horey u haysatay fiiso ansax ah.
ESTA iyo Macluumaadka VWP
Codsiyada ESTA waxaa lagu sameeyaa oo keliya online.
Faahfaahinta codsiyada muhiimka ah waxaa ka mid ah baasaboor iyo macluumaadka lacagta. Safarkaaga safarka waa ikhtiyaari waxaana dib loo cusbooneysiin karaa. Dhamaan goobaha khasabka ah waa in la buuxiyaa oo loo saxaa si sax ah. Maraykanku ma qaato jeegaga ama amarada lacag-bixinta ee Codsiga ESTA. Waxaa lagaa tagayaa shirkadaha sida ESTAmerica.org si ay uga caawiyaan una caawiyaan muwaadiniinta wadankaaga ka soo buuxi foomka si sax ah.
Yaa u baahan inuu codsado ESTA?
Qof kasta oo soo galaya Maraykanka oo hoos imaanaya Barnaamijka Ka-Reebidda Visa. Tani waxay u ogolaanaysaa Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Amniga inay horay u ansixiso Visa Waiver socdaalka ka hor inta aanay ka tegin dalalkooda. Kaliya dooro wadamada waa wadamada Visa Waiver, waxaadna ka heli doontaa liiskaas hoosta (VWC).
Arjiga cusub ee ESTA
Dhammaan safarrada ka imaanaya wadamada Visa Waiver waxay xaq u leeyihiin inay codsadaan
ESTA waxaa laga heli karaa oo keliya online
Waxay qaadataa wax ka yar saacadaha 10 si loo buuxiyo codsiga
72 saacadaha saacadaha shaqada ama ka yar
Cusbooneysii Codsiga ESTA
Cusboonaysii cinwaanka hoyga Maraykanka
Cusboonaysii cinwaanka emailka lagu isticmaalay codsigaaga ESTA
Hubi Codsiga Esta
Dib u eeg taariikhdaada dhicitaankaaga ESTA
Faahfaahin faahfaahinta arjigaaga ESTA aad u fiican ka hor safarka
Dib u eeg faahfaahinta baasaboorkaaga
Cusbooneysii wixii macluumaad ah ee codsi cusub, haddii loo baahdo
ESTA E-Filingka Nidaamka Safarka Dalabka Visa.
Codsi Dheeraad ah 10
24 / 7 Taageerada Macaamiisha La sheekeyso Khabiir Taageero Socdaal Siyaabo ah Maanta.
lacag dib u celin
Haddii dalabkaaga safarkaaga aan la aqbalin, waxaanu bixinnaa 100% Dammaanad Lacageed Lacageed.
Yaa loo oggolaaday inay safar ku dhex maraan Mareykanka?
Booqashada kuwa la jecel yahay, ama u imaanaya fasax Maraykanka? Waa inaad ka heshaa oggolaansho sax ah Dawlada Mareykanka ka hor intaadan soo gelin wadanka. Kiisaska qaarkood, tani macnaheedu waa dalbashada fiiso laakiin haddii aad tahay muwaadin waddan ah oo ku jira Barnaamijka Ka-Reebidda Visa (VWP), adoo isticmaalaya Nidaamka Oggolaanshaha Safarka ee ESTA wuxuu noqon karaa ikhtiyaar fudud oo degdeg ah. VWP waxay u oggolaanaysaa muwaadiniinta dalalka 38 in ay u helaan ogolaansho safar oo Mareykanka ah iyada oo loo marayo Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Mareykanka iyada oo aan helin baasaboorka fiisaha. Haddii aad imminka tahay muwaadin ka mid ah wadamada kaqaybgalayaasha oo aad haysato baasaboor aan sax ahayn, waxaad u baahan tahay keliya inaad codsato foomka ESTA. Haddii aad u qalanto, waxaad heli doontaa ogolaansho inaad ku safartid gudaha Mareykanka maalmaha 90. Haddii aad ku safraysid waddanka Mareykanka adoo wadata waddan kale, waxaad weli u baahan tahay inaad codsato codsiga ESTA.
Arjiga Visa-ka ee Vs. Arjiga ESTA.
Shuruudaha ESTA ee hoos imaanaya Barnaamijka Ka-Reebidda Visa-ka (VWP) ayaa aad uga yar dalbashada codsiyada elektaroonigga ah ee fiisaha aan soo-galootiga ahayn. Codsiga Visa wuxuu u baahan yahay saacad ama wax ka badan si loo buuxiyo dhammaan safarka iyo taariikhda ku saabsan naftaada. Vs. codsiga ESTA wuxuu ku saabsan yahay daqiiqado 10.
Ujeeddooyinka safarka marka aad codsaneyso ESTA
Markaad codsaneyso ESTA, waxaa loo isticmaalaa in lagu arko kuwa la jecel yahay, fasaxyada, booqashada dhakhtarka, iyo ku habboon safarada ugu badan ee ganacsiga Mareykanka. Qaar ka mid ah ujeedooyinka safarka waa la aqbalaa, halka kuwa kalena u baahan yihiin codsi buuxa oo Visa ah.
Dalxiiska, Camping, iyo Site Seeing
Booqashada Booqashada Baarka
Booqashada dadka aad jeceshahay ama saaxiibbada
Kuleejooyinka booqashada ka hor inta aanad dalban Visa si aad uga soo qayb gasho
Daaweynta Caafimaadka iyo booqashada dhakhtarka
Munaasabadaha Bulshada, Riwaayadaha, ama Kulanka Kooxaha Adeegyada
Ka qeyb qaadashada ciyaaraha, muyuusikada, isboortiga, ama nooc kasta oo kale oo la mid ah tartamooyinka ama dhacdooyinka, (Lama bixin karo lacag bixinta)!
La-talinta ganacsiga iyo shirarka ganacsiga
Ka qeyb qaadashada waxbarasho, shir xirfadeed, ama nooc kasta oo ah shirarka. Tusaale ahaan Comic Con
Tababarka Xirfadaha Waqti-Gaaban (Lama bixin karo ilo kasta oo Maraykanka ah marka laga reebo kharashyada aanad u dhicin).
Codsiyada Visa waxaa looga baahan yahay safarka Mareykanka ee Mareykanka haddii:
Shaqo waqti buuxa ah
Long -Term College, Waxbarashada, Kulliyadda Farsamada
Saxafiyiin ajnabi ah, saxaafad, filim, raadiye ama warbaahinta kale
Raadinta deganaanshaha rasmiga ah ee Mareykanka
Miyaad ubaahan tahay ESTA in Laga Tago Mareykanka?
Haddii qof aan aheyn muwaadin Mareykan ah deg deg ah oo joogto ah transit iyada oo loo marayo ka United States, isaga / iyadu waxay u baahan kartaa gaadiid sax ah Fiiso C-1, haddii uusan aheyn muwaadin waddan ah oo heshiis la leh United States u oggolaanaya muwaadiniintooda inay u safraan United States la'aan a fiisada .
Miyaan u baahanahay fiiso lagu xirayo duulimaadka Mareykanka?
Maraykanka The Waaxda Amniga Gudaha waxay u baahan tahay Visa Barnaamijka Ka-dhaafka (VWP) ee safarka si aad uga heshid ogolaansho Nidaamka elektarooniga ee oggolaanshaha safarka (ESTA) ugu yaraan saacadaha 72 ka hor inta aan la hubin for a duulimaad Mareykanka ama isku xirka US ESTA ayaa loo baahan yahay.
Miyaan u baahanahay fiiso haddii aan haysto dalka Maraykanka?
Gaadiidka deg-degga ah oo joogto ah macnaheedu waa in safarkaaga aad ku socotid meesha ugu dambeysa ee aad ka mid tahay a hoyga ee Maraykanka ah, waana inaad joojisaa halkaa, laakiin ma lahan mudnaan kale. ... Si kastaba ha ahaatee, haddii aad horey u haysatid fiisada B-1 ama B-2 ee Mareykanka, waana inaad ku dhex mari kartaa waddanka, uma baahnid Fiiso C.
Wadamadee u Baahan ESTA E-Baasaboorka Mareykanka?
Booqdayaasha waxay joogi karaan maalmaha 90 gudaha Maraykanka taas oo sidoo kale oo ay ku jiraan wakhtiga Kanada, Mexico, Bermuda, ama jasiiradaha Caribbean haddii imaanshahani uu maray maraykanka. ESTA ayaa looga baahan yahay haddii ay timaado hawo ama markab shidaal. Ka-dhaafitaanka Visa waxaa lagu dalbadaa la'aanteed ESTA xudduudaha xudduudaha, laakiin VWP looma adeegsan karo (tusaale ahaan fiiso ayaa loo baahan yahay) haddii rakaabku yimaaddo hawo ama baddeeda oo aan la ogolaan.
Tan iyo 2016, Ka-dhaafitaanka fiisaha ma khuseeyo kiisaska uu qof hore u lahaa safarka Iran, Ciraaq, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya, ama Yaman markay tahay ama ka dib March 1, 2011 ama kuwa u dhashay labada wadan ee Iran, Ciraaq, Suudaan ama Suuriya. Qeybaha qaarkood sida diblomaasiyiinta, milatariga, suxufiyiinta, shaqaalaha bani'aadamnimada ama ganacsatada sharciga ah ayaa laga yaabaa in ay haystaan ​​shuruudaha fiisada laga dhaafo Xog-hayaha Amniga Gudaha.
Dalxiisayaasha iyo Waddamada Wadooyinka.
Waddamada si loogu magacaabo aqoonsiga barnaamijka Ka-dhaafka Visa waxay ku dhex jiraan "map map" iyo u-qalmitaanka inay ka qaybqaataan. Magacaabista wuxuu bilaabayaa qiimeyn faahfaahsan oo ku saabsan Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Maraykanka ee ilaalinta nabadgelyada waddanka ee dalkiisa iyo hannaanka socdaalka. Ma jiro wakhti go'an oo la xidhiidha inta uu dalku ku sii jiri doono liiska la magacaabay ka hor inta aan la oggolaan ama laga diidin barnaamijka.
Laga soo bilaabo 2005, Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Mareykanka waxay wadahadal la sameysay wadamada loo yaqaan "wadamada khariidada waddooyinka," kuwaas oo danaynaya inay ku biiraan (ama dib ugu noqdaan) VWP. Qeybaha asalka ah ee 19, 10 ayaa la dhigey VWP.
Xaq u yeelashada ka-dhaafitaanka fiisaha ayaa laga yaabaa in lagala noqdo wakhti kasta. Tani waxay dhici kartaa haddii Maraykanku uu aaminsan yahay in muwaadiniinta dal ka mid ah ay u badan tahay inay ka badan tahay kahor inay ku xadgudubaan xaddidaadkooda VWP, sida shaqo la'aanta ama ujoogsanaya muddada ay joogtay ee Maraykanka. Sidaa awgeed, ArgentinaKa qaybqaadashada VWP waxaa laga joojiyay 2002 iyadoo la eegayo dhibaatada dhaqaale ee ka jirta dalkaas iyo saameynta ay ku yeelan karto socdaalka iyo sharcidarrada sharci darada ah ee muwaadiniinta Mareykanka ah iyada oo loo marayo habka VWP. Uruguayka qaybqaadashada barnaamijka waxaa laga buriyay 2003 sababo la mid ah. Inkasta oo ay jirto xaalad siyaasadeed iyo mid dhaqaale ee waddanku si toos ah u go'aamin karo u-qalmitaanka, waxaa si wayn loo rumeeysan yahay in muwaadiniinta siyaasad ahaan xasillooni iyo dhaqaale ahaanba horumarsan aysan haysanin dhiirigelin badan si ay si sharci darro ah u raadsadaan shaqo iyo in ay ku xadgudubaan fiisahooda intii lagu jiray dalka Mareykanka, wuxuu tixgelinayaa in ansixiyo ama diido fiiso. Israa'iil laguma soo darin VWP qayb ahaan sababtoo ah baaritaan adag Dadka Falastiiniyiinta ah ee u safraya Israa'iil, sidaas darteed ma buuxin shuruudaha isdhexgalka.
The Midowga Yurub ayaa ku cadaadisay Maraykanka in ay kordhiso barnaamijka Dalalka Visa Waiver si ay shanta dal ee xubnaha ka ah dalal kale oo aan hadda ku jirin: Bulgaria, Croatia, Cyprus, Poland, iyo Romania. Dhamaan kuwan waa "wadamada khariidada waddooyinka" marka laga reebo Croatia, oo dhawaan uun ku biiray Midowga Yurub 2013. Bishii Nofeembar 2014 Dawladda dalka Bulgaria ayaa ku dhawaaqay in aysan ansixin doonin iskaashiga ganacsiga Transatlantic iyo Iskaashiga maalgashiga haddii aysan Maraykanku qaadin fiisooyinka muwaadiniinta.
Muwaadiniinta Yurub ma u baahan yihiin Visa USA?
Muwaadiniinta Britishka ku safraya ansax ah, mashiinka shakhsi ahaan loo akhrisan karo ama baasaboorka, oo leh tigidh dib u laabasho ama dibedda, iyo kuwa sii joogaya in ka yar maalmaha 90, u qalmaan Barnaamijka Ka-dhaafka Visa iyo awoodaan Fiisaha socdaalka-waxaad ku qortaa oo kaliya Nidaamka Elektronka ee Oggolaanshaha Safarka (ESTA).
Miyay muwaadiniinta Maraykanku u baahan yihiin fiiso EU ah si ay u galaan Yurub? Muwaadiniinta Mareykanka ah oo haysta baasaboor Mareykan ah oo aan shaqayn karin ayaa u safri kara 26 wadamada xubnaha ka ah Yurub ee degaanka Schengen ugu badnaan maalmaha 90 aanad dalban ama helin Schengen dal-kugalka dalxiiska gaaban ama safar ganacsi.
Booqashada kuwa la jecel yahay, ama u imaanaya fasax Maraykanka? Waa inaad ka heshaa oggolaansho sax ah Dawlada Mareykanka ka hor intaadan soo gelin wadanka. Kiisaska qaarkood, tani macnaheedu waa dalbashada fiiso laakiin haddii aad tahay muwaadin wadan ka mid ah Barnaamijka Baxnaaninta Visa (VWP), adoo isticmaalaya Nidaamka Farsamada ee Safarka Safarka (ESTA) waxay noqon kartaa ikhtiyaar fudud oo degdeg ah.
Miyaa Hantida ESTA ee Sannadlayaasha Dalbashada?
Your THIS oggolaanshaha guud ahaan waa caadi ansax ah safaro badan muddo laba sano ah (bilawga taariikhda lagu ogolaaday) ama ilaa baasaboorkaagu dhacayo, hadba kii soo horeeya *. Taas macnaheedu waa in ilaa iyo inta aad heshay a THIS oggolaansho safarka, uma baahnid inaad dib u codsatid intii lagu jiray ansax ah mudada. Shuruudaha ESTA ee hoos imaanaya Barnaamijka Ka-Reebidda Visa-ka (VWP) ayaa aad uga yar dalbashada codsiyada elektaroonigga ah ee fiisaha aan soo-galootiga ahayn. Codsiga Visa wuxuu u baahan yahay saacad ama wax ka badan si loo buuxiyo dhammaan macluumaadka safarka iyo taariikhda adiga kugu saabsan, waana inaad sugtaa bilo kahor intaadan ansixin. Vs. ah Codsiga ESTA waxay ku saabsan tahay daqiiqado 10.
Intee Ayuu Qaadaa Kharashka ESTA?
Isticmaalka dib-u-eegiskayaga iyo adeegsigeena adeega $ 89.00 USD. Qiimaha waxaa ku jira kharashka dowladda Mareykanka ee US $ 14 (qiyaasta £ 9) qof walba, waana in lagu bixiyaa kaarka deynta. Haddii codsigaaga la diido, waxaa kaliya oo ku kacaya $ 4. (kaas oo lagu sharxay Sharciga Horumarinta Socdaalka, 2009)
Maxaa dhacaya haddii ESTA kuu diiddo?
Haddii qofkii safarka ah la diido oggolaanshaha ESTA iyo xaaladdiisa ama xaaladeeda isma bedelin, codsi cusub ayaa sidoo kale la diidi doonaa. Qofka socdaalka ah ee aan xaq u lahayn ESTA xaq uma laha safarka hoos timaada Barnaamijka Ka-Reebidda Visa waana inay dalbadaan fiisaha aan qofku haysan ee a US Safaaradda ama Qunsuliyadda.
Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa si ay u hesho ESTA?
An Arjiga ESTA wuxuu ku saabsan yahay (10) toban daqiiqo foomka isla markaana si dhakhso ah looga shaqeeyaa internetka. Inta badan codsiyada waxaa la ansixiyey daqiiqad gudahood. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira kiisaska go'aanka ku saabsan codsiga in dib loo dhigo Saacadaha 72. Taasina waa sababta ay ufilan tahay processor-yada dib u eegida codsigaaga waa habka ugu fiican. Dhammaan soo gudbinta ugu badnaan waxaa lagu bixinayaa kaarka deynta. ESTAmerica waxay qaadan kartaa wax kale ikhtiyaarka lacag bixinta in Maraykanku Maraykanku aanu ka ahayn marka laga reebo.
Codso codsigaaga Maanta
Ku bilow safarkaaga saacadaha 72
KU SAABSAN ESTAMERICA.ORG
Waxaan bixinnaa ugu dhaqsaha badan uguna fudud sida US E-File ESTA Passport. Nidaamkayagu wuxuu kugula talin doonaa su'aalaha aad u baahan tahay, kooxdayaduna waxay dib u eegi doontaa codsigaaga ka hor intaadan u dirin Waaxda Socdaalka ee Mareykanka. ESTAmerica waa shirkad diiwaan gashan gudaha Maraykanka.
Jooga wareegga marka la cusbooneysiiyo shuruucda ESTA, Waxaan dirnaa emails si aan kuu ogeysiinno dalalka iyo Barnaamijka Ka-dhaafka Visa.
Nidaamka Bixinta E-Filingka ee la hubiyay iyo la isku halleyn karo
ESTAmerica waa hey'ad dalxiis oo saddexaad leh Adeegga macaamiisha 24 / 7.
Annagu ma ahan Dawlada Mareykanka ama Wakiilada Xuduudaha Xuduudaha.